Honolulu Mayor says US Travel Association is wrong and extends lockdown | Click to listen to more eTN Podcast Recordings
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • LGBTQ • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Nilaza ny ben'ny tanànan'i Honolulu fa diso ny Fikambanana Amerikanina Mpivezivezy ary manitatra ny fanidiana azy
7800689 1599607721040 a3b7ce446de6b
Home » Lahatsoratra » Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa » Nilaza ny ben'ny tanànan'i Honolulu fa diso ny Fikambanana Amerikanina Mpivezivezy ary manitatra ny fanidiana azy
Andao ho avy tsy ho ela, dia teny filamatra vaovao ho an'ny besinimaro mpandehandeha izay nambaran'ny US Travel Association androany. Nilaza i Hawaii fa tsy haingana dia haingana, ary ny ben'ny tanàna Kirk Caldwell avy any Honolulu androany dia nanitatra ny fanidiana roa herinandro faharoa izay heverina fa hifarana rahampitso alina mandritra ny tapa-bolana.
Ny ben'ny tanànan'i Honolulu Caldwell izay niara-niasa tamin'ny governoran'i Hawaii Ige dia nanitatra ny kaomandy "Mijanona ao an-trano" hatramin'ny 24 septambra miaraka amin'ny ankanavaka. Ny mponina sy ny mpitsidika izao dia mahazo mandeha mankeny amin'ireo valan-javaboary sy morontsiraka, saingy tsy maintsy mandeha irery izy ireo. Olona iray isaky ny mandeha, ary isaina ihany koa ho an'ny fianakaviana. Afaka mankafy sakafo any amin'ny valan-javaboary indray izao ireo mpitsidika tokana.
Fahavoazana lehibe tokoa 12 andro lasa izay raha nametraka ny laharana faharoa "Mijanona ao An-trano" i Hawaii ho valin'ny fihanaky ny valan'aretina tampoka teto amin'ny nosy. Talohan'izay dia nosokafana ireo fivarotana, trano fisakafoanana ary fivarotana lehibe. Trano fandraisam-bahiny nokasaina hisokatra sy ny isan'ny mpitsidika dia nitombo na dia teo aza ny baikon'ny quarantine 2 herinandro napetraka.
Betsaka no niampanga ny miaramila tamin'ny famelana ny mpikambana ao aminy sy ny fianakaviany ho tonga ao Aloha Lazao amin'ny isa marobe fa tsy voatery hamidy karantina. Niova tamin'ny 11 Aogositra io, fa mety tara loatra.
Avy amin'ny aretina vaovao maherin'ny 300 isan'andro iray vao 10 andro lasa izay, dia 66 isa izao ary maty 2. Ny fijanonana an-trano sy ny fanandramana goavana dia nanosika an'i Hawaii hiala amin'ny fanjakana misy olana ka hiverina amin'ny làlana haingana mety ho lasa mpitondra any Etazonia indray amin'ny fisorohana ny fihanaky ny virus COVID-19 mahafaty.
Ny filaharana Mijanona ao an-trano dia toa mandeha, fa ny Aloha Ny indostria laharana voalohany an'ny fanjakana dia voadona mafy. Waikiki Beach dia notandreman'ny polisy nitady ireo mpandeha amoron-dranomasina mandika lalàna, ary misy masoivoho manokana mandehandeha eny amin'ny lalantsaran'ny hotely mitady mpitsidika manitsakitsaka ny quarantine.
Nikatona indray izao ny trano fisakafoanana sy fisotroana rehetra, afa-tsy ny baiko mivoaka. Mihidy ny magazay afa-tsy ny fivarotana lehibe sy fivarotana Walmarts ary Costco. Mihidy ny ankamaroan'ny hotely sy hotely. Hôtely iray manontolo no hofain'ny fanjakana hampiantranoany ireo izay mararin'ny valanaretina coronavirus. Tsy toerana mahafinaritra fitsidihana intsony i Waikiki.
"Hisy zavatra betsaka kokoa [izay] hiankina amin'ny siansa rehefa hanokatra ny toekarentsika aorian'ny 24 septambra," hoy ny Ben'ny tanànan'i Honolulu androany. “Halamina izany amin'ny andro manaraka.”
Nilaza ny ben'ny tanàna Caldwell eTurboNews tsy mitovy hevitra aminy Fitsangatsanganana US ary WTTC amin'ny fitenenana manohitra ny fepetra takiana amin'ny quarantine ataon'ny fanjakana na ny firenena. Midika izany fa ny fangatahan'izy ireo ny sisintany malalaka dia tsy izay ao an-tsain'i Hawaii ho azy. Nanazava ny ben'ny tanànan'i Honolulu tamin'ny marobe maty sy mihabetsaka noho ny dia, io fangatahana io dia tsy zavatra mifanaraka aminy. Niaiky izy fa te hiasa sy handefa indray ny indostrian'ny fizahan-tany, ary azo takarina ny mandat avy amin'ireo fikambanana toy ny US Travel izay misolo tena an'ity indostria ity.
Nanampy ny Ben'ny tanàna fa manohana ny fitsapana izy. Ny fitsapana alohan'ny sy aorian'ny fahatongavany hanafohezana na hanafoanana ireo fepetra takiana amin'ny quarantine no lakilen'ny indostrian'ny mpitsidika hanorina indray.
Henoy ny ben'ny tanàna Kirk Caldwell: